Nyaya DzeBonde - Saizi Yechombo Chemurume Ine Inebasa Here Pabonde? (Part 1) Nyaya DzeBonde - Saizi Yechombo Chemurume Ine Inebasa Here Pabonde? (Part 1)
Nyaya DzeBonde - Saizi Yechombo Chemurume Ine Inebasa Here Pabonde? (Part 1)
Kukura kwechombo chomurume kune basa here uye Saizi yacho ndeimwe chete here pamurume umwe chete kana chimire? Ndichada kumbotsanangura nyaya iyi nokuti vamwe venyu vanoda zvoku kombeya varume, zvikuru kana wakambovata nevarume vakawanda.
Fungwa yako inokasira kuongorora kusiyana kwezvombo zvavo.
Chokutanga ndechokuti kana uchida chombo chikuru zvoreva kuti une chitubu chikuruwo saka hapana chakaipa. Zvikuru zvoenderana, zvidiki zvoenderanawo.
Ngatitangire pakubvunza kuti pakurhojana zvine basa here kuti chombo chikuru zvakadii? Mubvunzo uyu unonetsa kupindura nokuti umwe noumwe mukadzi ane mafungire ake pazviri. Kozotiwo munhukadzi anenge akambovata nevarume vakawanda vane masaizi akawanda ane waanoda pavari ipapo. Kana wakabva pahumhandara nomurume umwe chete mukaroorana mukaita vana venyu usina kumbovata noumwe murume, haunganyatsozivi kuti saizi ine basa here kana kuti haina. Zvinenge zvangove zvechishuvo (fantasy) kuti dai ndambowana chidiki kana kuti ziguru.
Murume kana akati twii ukapima nerhura chombo chinenge chiri kuma 17cm kureba. Ukaita sokuchisunga bhandhe uri pakati pacho unoda bhandhe rakareba 14-15cm. Tiri kutaura ma average zvoreva kuti zvimwe zvikuru zvimwe zvidiki pane saizi iyi. Asi ukabvunza murume kuti ane saizi yakadii, anokuudza saizi isiriyo. Anokuudza saizi diki pane zvaari chaizvo. ukabvunza mukadzi wake anokuudza saizi huru kupfuura zvaari chaizvo. Zvandiri kutaura izvi zvakabva pa research yakaitwa kunyika dzokumusoro (north of equator in western countries). Vanoongorora vakaongorora vakabvunzana kuti sei kuona kwevaridzi vezvombo kwakasiyana nekwevakadzi vavo ndokubvumirana kuti:
1. Murume achitarisa chombo chake anotarisa kubva mudenga chombo chiri pasi. chombo kazhinji hachina kuti tasa saka Estimate yake inonetsa opedzisira opa mupimo uri pasi.
2. Varume vakawanda vanoda chombo chikuru kupfuura chavanacho nokuti vanofunga kuti vakadzi vanoda zvikuru kuti vagute, saka murume achitarisa chombo chake anoona sokuti saizi yake haigutsi mukadzi.
3. Mukadzi achitarisa chombo anotarisa kazhinji akachibata mumaoko achihwa nokurema kwacho opedzisira apa mupimo uri pamusoro.
4. Mukadzi anoziva kuti chinofanigwa kupinda maari saka anoona chakakurisa pane zvaanoda.
Ukataura nevarume panyaya idzi vanokuudza kuti murume umwe noumwe anoda kuwedzera kukura kwechombo chake zvokuti dai kwaiva nomushonga wekukudza, mutengesi wemushonga wacho aiita millionnaire pasina kupera vhiki. Murume, chero asingagoni kumhanya nokuda kwekukura kwechombo, anongoda kuwedzegwa saizi. Haana basa nokuti pachinonopinda, nyakupinzwa anogwadziwa. Asi ndezvavarume. isu tinongoda zvavari izvozvo. Toda kuti vafunge kutirhoja zvinotora nguva yakawanda tichinakigwa. Zvokuti isaizi ani izvo ndezvebhutsu.
Chitubu chakadzika 8-10 cm zvichireva kuti murume ane 12cm anokwanisa kubata madziro ekumberi. Saka varume vakawanda vanopinda kaviri muchitubu (double the depth). Totizve panonaka kana muchirhojana pemukadzi panogumira pa 4cm mukati mechitubu. Kumberi kwese uko kunonaka nokuda kwekukwiziwa kunenge kuchiita 4 cm idzi. Saka tichitarisa pachokwadi tinoona kuti kana murume ane chombo akangopinza 5 cm anokwanisa kunakira mukadzi zvakapfuuridza nokungokoira pa 5cm iyoyo chete. Izvo zvokuzopinza yese 17 cm kwave kukara hako kwemurume kwete kwemukadzi. Mukadzi anenge atonakigwa kare.
Totizve saizi yechombo chemurume umwe chete iyeye haisiri saizi imwe chete nguva dzese. Zvinobva nokuti zemo rake rakakura sei panguva iyoyo. Pamwe unowana chakaoma sebwe, zvokuti chichipinda unotohwa chichikupatsanusa mativi mukati zvokuti kana kuti apinze chombo chese unenge usingadi. Kozoti dzimwewo nguva akaneta chinomira asi uchiona kuti hasha hachina. Pakadai unongohwa kuti sveverere chichipinda.
Kana chombo chisina kumira chinoita 7-10cm. kwahi futi kana kuchitonhora chinoita kadikidiki. Saka tingangoti pamurume umwe chete chinokwanisa kuva 7 -22 cm kureba zvichibva nokuti zemo rake riri papi panguva iyoyo. Kana murume akaneta chaizvo anokwanisa kumira asi kwete kuoma sebwe saka pamwe ukapima anenge ari kuma 13cm. asi akakurhoja akadaro unongonakigwa zvakafanana. Asizve, iwe paunopima chombo chomurume, unojairawo kubata nokutamba nacho.
Asizve kune vamwe varume vane mazihombe anosvika kuma 30 cm. Asi ndiko kuremara ikoko. Ukaroogwa neakadaro unototenga lubricant yokuwedzera kunyorova asi still handifungi kuti anokwanisa kupinza chombo chese usingagwadziwi.
Chinhu chakangozonakawo pavarume vakadai ndechokuti Chombo chikurukuru hachimiri zvokuoma sechesaizi kwayo. Ukaterera vanoziva nazvo vakaita Research dzacho vanoti chombo chakakurisa hachinyatsomira. Chinhu chakanaka kuti mukadzi haakuvari nacho.